लेख > दिन-द्वारा-दिन > म कसरी प्रभावकारी रूपमा प्रार्थना गर्छु?
मैले कसरी प्रभावकारी प्रार्थना गर्नुपर्छ?
यदि छैन भने, किन छैन? यदि हामीले सफलताको लागि परमेश्वरलाई सोध्यो भने, यो असफलता हो, असफलता? यो हामी कसरी हेर्छौं त्यसमा निर्भर गर्दछ। मलाई निम्न परिभाषाहरू एकदम राम्रो लाग्दछन्: विश्वास, प्रेम र पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा मेरो जीवनको लागि परमेश्वरको उद्देश्य पूरा गर्न र परमेश्वरबाट परिणामको आशा गर्न। जीवनमा यस्तो अनमोल उद्देश्यको लागि हामीले विश्वासका साथ प्रार्थना गर्न सक्षम हुनुपर्दछ।
"ओह, तपाईंले आफ्नो दास मोशालाई गर्नु भएको प्रतिज्ञाहरूलाई सम्झनुहोस्, जब तपाईंले भन्नुभयो:" यदि तिमीले विश्वासघात गरेनौ भने, म तिमीलाई जाति-जातिका बीचमा तितरबितर पार्नेछु " (नहेम्याह १.1,8 परिमाण अनुवाद)
यदि तपाईं भगवानलाई आफूले गरिरहेको काममा सफल हुन नसोध्न सक्नुहुन्छ भने नहेम्याहको जीवनबाट चारवटा चीज सिक्नुहोस् जुन तपाईं प्रभावकारी ढंगमा प्रार्थना गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ:
हाम्रो चरित्रलाई भगवानको चरित्रमा आधार बनाउनुहोस्। भगवानले जवाफ दिनुहुन्छ भनेर जान्नुहोस् प्रार्थना गर्नुहोस्: म यस प्रार्थनाको जवाफको लागि पर्खिरहेछु किनकि तपाईं विश्वासी परमेश्वर, महान् परमेश्वर, मायालु परमेश्वर, अद्भुत परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले यस समस्यालाई समाधान गर्न सक्नुहुन्छ!
परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरू दावी गर्नुहोस्। नहेम्याहले परमप्रभुलाई प्रार्थना गरे: “हे, तपाईंले तपाईंका दास मोशालाई गर्नुभएको प्रतिज्ञा सम्झनुहोस्। के एक भगवान सम्झना गर्न बोलाउन सक्नुहुन्छ? नहेम्याहले इस्राएल राष्ट्रलाई गरेको प्रतिज्ञाको सम्झना गराउँछन्। लाक्षणिक अर्थमा उनी भन्छन्, हे परमेश्वर, तपाईंले मोशा मार्फत हामीलाई चेतावनी दिनुभयो कि यदि हामी विश्वासघाती भयौं भने हामीले इस्राएलको भूमि खेर फाल्नेछौं। तर तपाईंले यो पनि प्रतिज्ञा गर्नुभयो कि यदि हामीले पश्चाताप गर्यौं भने, तपाईं हामीलाई जग्गा फिर्ता दिनुहुनेछ। के भगवानलाई सम्झाउनु आवश्यक छ? होईन के उसले आफ्ना प्रतिज्ञाहरूलाई बिर्सन्छ? होईन हामी जे भए पनि यो किन गर्छौं? यसले हामीलाई उनीहरूलाई बिर्सिन मद्दत गर्दछ।
हामीले सोध्ने कुरामा धेरै विशिष्ट हुनुहोस्। यदि हामी एक विशिष्ट उत्तरको आशा गर्छौं भने हामीले यसको लागि निश्चित रूपमा सोध्नु पर्छ। यदि हाम्रो अनुरोधहरू सामान्य राखिएको छ, हामी कसरी थाहा पाउने छौं कि यदि तिनीहरूले उत्तरहरू दिएका छन भने? नहेम्याहले पक्रिएन, उनी सफलताको लागि भन्छन्। उहाँ आफ्नो प्रार्थनामा धेरै विश्वस्त हुनुहुन्छ।